अपाङ्ग व्यक्तिको सहयोगको पैसा खाएर फ’रार भारतिय युवती । कसरी लुटिन त पैसा ? (भिडियो) – Patrika Nepal
अपाङ्ग व्यक्तिको सहयोगको पैसा खाएर फ’रार भारतिय युवती । कसरी लुटिन त पैसा ? (भिडियो)
पुष ३०, २०७८ शुक्रबार 38
त्यहि बाल्यकालमा लागेको चो टको सिकार उनी अहिलेसम्म पनि भैरहेका छन । पछिल्लो समय सामाजिक संजालबाट आफ्नो उपचारका निम्ति केही पैसा मनकारि मनहुनेले सहयोग गरेका थिए । तर त्यहि सहयोग गर्न भन्दै नजिकिएका समाजसेविको नाममा कलंकहरुले त्यो जम्मा गरेको सबै पैसा लिएर फरार भएका छन्,भारतिय युवती भएको उनले बताए । अपांग त्यहि माथि सहयोग गर्नुपर्नेमा उल्टै अपांगकै यसरी पैसा लगेर सम्पर्कबिहिन भैदिनुले आफुले बिश्वास गरेर ठूलो गल्ति गरेको र अरुको दुख आफुले देख्नै नसक्ने र भावनात्मक रुपमा कमजोर हुनुनै आफ्नो कमजोरि भएको उनी बताउँछन् ।हेर्नुस् भिडियो सामाग्री
Prevगगन–विश्व–शेखर-निधिहरू डरले थुरुरु भएर दुलाभित्र पसेका बेला खतिवडाले दिए बबाल अभिव्यक्ति
Nextबलिउडका हुनाहार अभिनेता अनिल कपुर र रणवीरसँग फिल्म खेल्न पाउँदा खुशीले फुरुगं छन् बिपिन कार्की